Madaxwaynaha Mareykanka oo u hanjabay Turkiga – Radio Daljir
Madaxwaynaha Mareykanka oo u hanjabay Turkiga
Janaayo 14, 2019 4:55 b 0
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay Turkiga inuu baabi’in doono dhaqaalihiisa hadii uu qaado weerar militeri oo ka dhan ah dagaalamayaasha Kurdiyiinta.
Hanjabaadda Trump ayaa imaanaysa Axaddii, waqti muran uu ka dhaxeeyo Mareykanka iyo Turkiga oo kusaabsan kooxda Kurdiga ee isbahaysiga la ah Mareykanka oo qorshaynaya ciidamadiisa Suuriya inuu la baxo.
Madaxwaynaha Mareykanka ayaa sheegay saldhig kalle oo u dhow inay ka weerari doonaan haddii isbadal uu ku yimaado weerarada kooxda Daacish, waxaana sidoo kalle uu yiri waxaan baabi’in doonaa dhaqaalaha Turkiga haddii ay weeraraan Kurdiga, isagoo dhanka kalle wada qorshe lagu hirgalinayo 30km dhul ah oo aag nabad galyo ah.
Turkiga ayaa dagaalamayaasha Kurdiga u aragta urur argagaxiso oo caqabad ku ah ammaanka wadankeeda, waxaana dhanka kalle uu horay u sheegay inuu weerari doono haddii Mareykanka uu ka baxo wadankaasi Suuriya.
Dhanka kalle xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar lugtiisii ugu dambeysay booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe, waxaa uu horay u tagay wadanka Imaaraatka Carabta oo uu kula soo kulmay dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed BIn Saayid, sidoo kalle waxaa uu tagay boqortooyada Sacuudi Carabiga.
Shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Dooxa ayaa waxaa uu carabka ku adkeeyey dilkii wariyaha Sacuudiga Jamaal Khashoggi inaan la aqbali doonin oo ay kula xisaabtamayaan dowladda Sacuudi Carabiya.
Pemoeo ayaa dadaal ugu jira sidii dowladaha Khaliijka oo khilaaf uu ka dhaxeeyo uga dhaadhicin lahaa in khilaafka laga gudbo, lana wajaho dagaal iyo xayiraado dhaqaalle oo lagu soo rogayo wadanka Iiraan oo gobolka saamayn ku leh.
Hoos kadaawo Warbixinta Muqaal ah
Faransiiska wali waxaa ka jira dibadbaxayada ka dhashay dhaqaalaha dalkaasi